Dirqaalee Hangul /Hanja/
jijjiirraa Hangul/Hanja dhaaf dirqalee qindeessi..
Galmee jecha hiikaa fayyadamaa.
Galmee hiikaa jechootaa hiikaa fayyadamaa mara tarreessa.sanduuqafilannoo galmee hiikaa jechootaattiaanee jnu kan fayyadamuu bar baaddefili. Sanduuqa filannoo galmeehii kaa jechootaatti aanee jiru han fayyadamuu hin barbaadnehaqi.
Bakka galmee jechootaa haaraa uumuu dandeeddutti,sanduqa qaaqa galmee hiikaa jechaataa haaraa bana.
Galmee jechootaaf maqaa galchi. Galmee hiikaajechoota sanduuqa tarreeGalmee hiikaa jechootaa fayyadamaa keessatti agar siisuuf TOLE cuqaasi.
_Qaaqa Galmee jechoota maamiloogulaali bana iddoo fayyadamaa-hiika galmee jechootaa gulaaluu dandeessu.
Galmee jechoota hiikaa fayyadamaa filatamee haqa.
Dirqaalee dabalataa galmee hiikaa jechootaamaraaq ifteessa.
Jecha qubata dirbaasii tuftadhu
Arfiilee qubataa dhumaa jechoota koonyaatti yeroo galmee hiikaa jechootaa barbaaddu tuffata.
Jalqaba galfatootadhihoo fayyadan mul'isi.
Yaada dhihaatz kan bakka bu'insaa dhumarratti akka galfata jalqa baatti tarree irratti filte mul'isa.
Galfata addataa mara ofumaan bakka buusa.
Jechoota, jecha bakka bu'iinsaa tokko qofa qaban ofumaan bakka buusa.
Title is: Dirqaalee Hangul /Hanja/